Wararka - Curcumin loo Muujiyay in lagu Hormariyo Calaamadaha Dhiigga Dhiigga
Natiijooyinka daraasad cusub oo lagu daabacay joornaalka Biomed Central BMC waxay muujisay in soosaarka cowsku uu ahaa mid waxtar u leh sida paracetamol yareynta xanuunka iyo calaamadaha kale ee jilibka osteoarthritis (OA). Daraasadu waxay muujisay dhismaha bioavailable inuu waxtar badan u lahaa yareynta caabuqa.
Cudurka 'Osteoarthritis' waa cudur cilad ku dhaca xubnaha kala goysyada oo lagu garto burburka carjawda, dahaadhka wadajirka ah, seedaha, iyo lafta hoose. Tilmaamaha caadiga ah ee cudurka osteoarthritis waa adkaansho iyo xanuun.
Waxaa hogaaminayey Shuba Singhal, PhD, daraasaddan daaweynta ee la kala soocay, oo la xakameeyey waxaa lagu qabtay Waaxda Lafaha ee Isbitaalka Lok Nayak Jai Prakash / Maulana Azad Medical College, New Delhi. Daraasadda, 193 bukaan ah oo laga helay cudurka osteoarthritis ee jilibka ayaa loo kala soocay si loo helo mid ka mid ah ka soo baxa cute (BCM-95) sida 500 mg kaabsal laba jeer maalintii, ama kiniin 650 mg ah paracetamol saddex jeer maalintii lix toddobaad.
Calaamadaha xanuunka jilibka ee xanuunka, qallafsanaanta wadajirka ah, iyo hoos u dhaca shaqada jireed ayaa lagu qiimeeyay iyadoo la adeegsanayo Tilmaamaha Cudurka Osteoarthritis ee Western Ontario iyo McMaster. Kadib lix toddobaad oo daaweyn ah, falanqaynta jawaab-bixiyuhu wuxuu muujiyey horumar weyn oo ku yimid dhibcaha WOMAC dhammaan qeybaha la barbardhigi karo kooxda paracetamol, iyadoo 18% ka mid ah kooxda BCM-95 ay soo wariyeen 50% horumar, iyo 3% maadooyinka xusaya 70% horumar.
Natiijooyinkani waxay si wanaagsan uga muuqdeen astaamaha calaamadaha dhiigga ee kooxda 'BCM-95': Heerarka CRP waxaa hoos u dhacay 37.21%, heerarka TNF-α waxaa gooyay 74.81%, taasoo muujineysa in BCM-95 ay ka fiicnaatay paracetamol.
Daraasadu waxay ahayd dabagal daraasad Arjuna ah oo la sameeyay sanad ka hor taasoo muujisay xiriir wanaagsan oo ka dhexeeya qaabeynta curcumin-keeda iyo daryeelka osteoarthritic.
Benny Antony, oo ah agaasimaha wadajirka ah ee shirkadda Arjuna ayaa yidhi "Ujeedada daraasaddan hadda waxay ahayd in lagu dhiso daraasadihii hore si loo helo hufnaan iyo qeexitaan iyadoo lagu darayo calaamado badan iyo habka dhibcaha ugu fiican." "Saamaynta anti-arthritic ee BCM-95 ee osteoarthritis waxaa loo aaneynayaa awoodeeda wax ka beddelka calaamadaha anti-bararka TNF iyo CRP."
Jilibka OA waa sababta ugu weyn ee naafonimada iyo xanuunka dadka waaweyn iyo dadka da'da weyn. Qiyaas ahaan 10 illaa 15% dhammaan dadka qaangaarka ah ee ka weyn 60 sano waxay leeyihiin xoogaa heer ah OA, iyadoo baahsanaanta dumarka ay ka badan tahay ragga.
"Daraasadani waxay dib u xaqiijineysaa saameynta anti-arthritic ee BCM-95 waxayna siineysaa rajo cusub malaayiin si ay u horumariyaan tayada noloshooda," ayuu yiri Nipen Lavingia, oo ah lataliyaha hal-abuurka ee shirkadda Arjuna Natural oo fadhigeedu yahay Dallas, TX.
“Waxaan wax badan ka baranaynaa farsamooyinka ka dambeeya curcumin ee saameynta anti-bararka taas oo aan aaminsanahay inay tahay natiijo ka timid awooddeeda ay ku horjoogsaneyso calaamadaha pro-inflammatory, sida prostaglandins, leukotrienes, iyo cyclooxygenase-2. Intaa waxaa dheer, curcumin waxaa loo soo bandhigay in lagu xakameeyo dhowr cytokines pro-inflammatory iyo dhexdhexaadiyeyaasha sii deynta, sida buro necrosis factor-α (TNF-α), IL-1, IL-8, iyo nitric oxide synthase, ”ayuu yiri Antony.
Iskudhafka gaarka ah ee BCM-95 ee curcuminoids iyo turmerone-hodan ku ah saliidaha lagama maarmaanka ah waxay ka adkaataa curcumin astaamaha cilmiga bioavailability sababo laxiriira dabeecad ahaan lipophilic sare.